Sadax Ganacsato Soomaaliya oo lagu dilay K/Afrika
Friday January 13, 2017 - 10:10:27 in Wararka by Super Admin
Dalka Koonfur Afrika oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa inta badan waxaa ka dhaca dilal loo geysto Dhalinyarada Soomaalida ah ee halkaasi ku ganacsada.
48-dii saac ee la soo dhaafay ayaa Degaanada Soomaalida ay ku ganacsto ee ku yaalla Koonfur Afrika waxaa lagu dilay Saddex Dhalinyaro soomaali ah, kuwaas oo dilalkooda ay ka dambeeyeen burcad Koonfur Afrikan ah.
Dhalinyarada la dilay oo Da’dooda ay ka hooseyso 30-sano ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Yuusuf Macalin, Maxamed Xuseen Cabdi iyo Aadan Maxamed Siyaad, sida uu sheegay wariye ku sugan dalkaasi.
Booliska Dalka Koonfur Afrika ayaa wada baaritaano iyo Howlgallo lagu raadinayo burcadii sida arxan darada ah u dishay dhlinyaradan, waxaana ay sheegeen in gacanta ku soo dhigi doonaan.
Soomaalida ku nool Koonfur Afrika ayaa cabsi badan ka muujiyay dilalka loo geysto dhalinyarada Soomaalida ah ee ku ganacsata dalkaasi, waxaana ay sheegeen in ay si aad ah uga soo horjeedaan.